Akụkọ Ụwa – Page 8 – Ụwandịigbo
Ogbunigwe Agbawaala nʻỤlọ Onyeisioche Ọhaneze Ndịigbo
Posted May 3, 2018 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ndị omekome atụọla ogbunigwe nʻụlọ onyeisioche Ọhaneze Ndịigbo bụ Maazị Nnia Nwodo. Nke a mere nʻụtụtụ ụbọchị Ụka mgbe ọnwa Apureelu dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na iteghete. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nʻEnugwu bụ Maazị Ebere Amaraizu siri na ọ bụ nʻụfọ ka ndị ekperime a siri tụnye ya bụ ogbunigwe. Ndị hụrụ nʻanya na-akọwa na ya bụ ogbunigwe gbariri akụkụ ụlọ ahụ mana o merughi mmadụ ahụ. […]
A Mala Maazị Bill Cosby Ikpe
Posted April 27, 2018 April 27, 2018 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ụloikpe dị na mba Amerika amala Maazị Bill Cosby ike na ọ kpasoro ụmụnwaanyị agwa adịghị mma. Ihe karịrị ụmụnwaanyị atọ kwuru na Cosby tinyeere ha ihe na mmanya nke mere ha ha amakwaghị onwe ha. Ha kwuru na nke a mere ka Maazị Cosby werezie ha mere ihe masịrị ya. Mgbe a gụpụtara ọmụmaikpa, nke a were Maazị Cosby iwe nke mere ka ọ taa mba ma kpọọ onye […]
Posted April 26, 2018 April 27, 2018 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ndị Naijiria na-anọzụ nʻụlọ ha nọpịa ihe ha jiri bụrụ nwoke. Ndi Fulani na-achị ehi aghọolara ụmụmmmadụ o so chi egbu. A na-ekwu nke ha mere, ha ana-eme ọzo. Ugbu a, ha awakpola ndị obodo Ọkpankụ, dị n’okpuru ọchịchị Anịnri nke steeti Enugu ọzọ, ma were mma gbukasịa otu onye nche. Ya bụ mkpamkpa bụ nke were ọnọdụ ụbọchị Monde gara aga ma bụrụkwa nke wetara ọtụtụ mmerụ nyere nwa […]